11 Kaararka Kirismaska ​​oo Bilaash ah | Abuurista khadka tooska ah
Inbadan hambalyo sanadka Mar labaad, inaan urajeeyo Ciidaha Farxada leh, u dirista kaararka boostada asxaabtayada ugu dhow iyo qoyskeena waxay u tahay dhaqan badan oo khasab ah.
Qoraalkan waxaan kuugu keenaynaa 11 kaararka kirismaska ​​oo bilaash ah qaab vector ah (qaar qaab .ai-gaar ah loogu talagalay Adobe Illustrator- iyo kuwa kale oo ku jira .ep). Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax ka beddesho cabirkooda (weyneeyaan ama yareeyaan) inta aad rabto adigoon tayada kaa lumin. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad ku furto faylasha ayaa ah, marka laga hadlayo faylasha .ai, Adobe Illustrator; kuwa ku jira .eps waxaa lagu furi karaa barnaamij kasta oo vector ah (Sawire, Corel Draw…).
11 Kaararka Kirismaska ​​oo bilaash ah
Farxad 2014 aad u midab badan: Sawirka Vector ee qaabka 626 x 626 px .ai, waxaa sameeyay qallalan.
yuul: Muuqaalka Vector ee qaabka .ai oo ah 500 x 626 px.
2014: Muuqaalka Vector ee qaabka .ai oo ah 500 x 626 px.
Geedka Kirismaska: Muuqaalka Vector ee qaabka .ai oo ah 501 x 626 px.
Ciid Wanaagsan: Muuqaalka Vector ee qaabka .ai oo ah 500 x 626 px.
Ciid wanaagsan Christmas 2: Muuqaalka Vector ee qaabka .ai, 500 x 626 px.
Diinta leh qurxinta: Muuqaalka Vector ee qaabka .ai, 438 x 626 px.
Kaarka leh geedka kirismaska ​​3D (waxaad u baahan tahay inaad isdiiwaangaliso oo aad gasho si aad u soo dejiso): sawirka vektorka oo qaab .eps u eg
Baakadka 'Vector Pack' (Waxaad u baahan tahay inaad isdiiwaangaliso oo aad gasho si aad u soo dejiso): hal sawir waxaad haysaa dhowr sawir oo la xiriira Kirismaska ​​(dhammaantood waa kuwa ka muuqda sawirka, gudaha "xirmada hadiyadda"). Waxaad dooran kartaa hal shay oo aad ku dhajin kartaa shaqo kale. Qaabka .Eps
Geedka kirismaska ​​oo leh qaansooyin (Waxaad u baahan tahay inaad diiwaangeliso oo aad gasho si aad u soo dejiso): waxaad ku beddeli kartaa Lorem Impsum qoraalka aad doorbidayso.
Deero qosol badan (waxaad u baahan tahay inaad isdiiwaangaliso oo aad gasho si aad u soo dejiso): sawirka vektorka oo qaab .eps u eg
Haddii aad rabto inaad u hesho macluumaad badan oo garaaf ah naqshadahaaga kirismaska, waxaad u leexan kartaa maqaalkan kale oo aad ka heli doonto Xirmooyinka saamaynta Bokeh.
Macluumaad dheeraad ah - Xirmooyinka saamaynta Bokeh si loogu daro naqshadahaaga Kirismaskan.
Xigasho - Freepik, Vectorized ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Kaararka kartoonka » 11 Kaararka Kirismaska
12 Textures Bilaash ah